Amandla Womoya - Ukuvuselelwa Okuluhlaza | Ukuvuselelwa Okuhlaza Okuhlaza (Ikhasi 2)
Ukukhula okunganqandeki kokuvuselelekayo
Umbiko wakamuva owethulwe yinhlangano iREN21 Organisation ukhombisa ukukhula okunganqandeki kokuvuselelekayo, ikusasa labo elithembisayo nekusasa elingcono.
Amaphrimiyamu okuvuselelwa azokwehla ukunciphisa intengo kagesi
Uhulumeni uzobuyekeza inzuzo efanelekile yokuvuselelwa kusuka ngo-2020, ufuna ukwehlisa amaphrimiyamu ukwehlisa intengo kagesi kuze kufike ku-10%
Indali elandelayo yamandla avuselelekayo izoba ngoJulayi 26
Ngemuva kokuphumelela kwendali edlule, uhulumeni umemezele enye i-3000MW ngoJulayi 26, imithetho izofana neyangaphambili.
I-Uruguay yaba kanjani izwe elihola ngamandla emimoya
Izwe elincane elingenawo uwoyela lingehlisa kanjani intengo kagesi walo, linciphise ukuncika kwalo emafutheni futhi libe ngumholi emandleni omoya?
Sizoba nendali entsha evuselelekayo
UNgqongqoshe Wezamandla, Ezokuvakasha wethule indali entsha, lesi sicelo esisha sizoba ngamamegawathi angama-3.000 XNUMX futhi sizobhekelwa amandla kagesi nawomoya.
Yini isiQhingi saseDogger? Isiqhingi sokuzenzela esizokhiqiza amandla avuselelekayo kubantu abayizigidi ezingama-80.
I-Dogger Island ingumsebenzi wesiqhingi owenziwayo, ingahlinzeka ngamandla avuselelekayo kubantu abayizigidi ezingama-80 eYurophu ngo-2050. Inganekwane yangempela noma yesayensi?
Amandla entengo ebiza imali eNgilandi ngenxa yomoya onamandla
Ngenxa yomoya ovela epulazini lomoya laseLondon Array, intengo yamandla ifinyelele kuma-19,25 amakhilogremu nge-MWh futhi yahlala ingekho emahoreni ama-5.
UMnyango Wezamandla uthumele i-CNMC uhlaka lokulawula indali ye-3GW yezinto ezivuselelekayo, ngethemba lokuthi izovalwa ngaphandle kwezindleko ohlelweni.
Kusukela ezikhathini zasendulo, umuntu usebenzise umoya ukwenza izinto eziningi. Umlando wamandla omoya ugcwele izigigaba, ushintshe kanjani?
Ukuguqulwa okumangalisayo kweForestalia
IForestalia iphinde yashanela endalini yokuvuselelwa okwenziwe nguHulumeni ngoMeyi odlule, yanikezwa ama-megawatts (MW) ayi-1.200 3.000 kwabangu-XNUMX ababenikelwe.
Ukwenziwa ngcono kwamandla avuselelekayo eSpain
Kusukela ukuphela konyaka we-2011, kuvunyelwe uchungechunge lwezinyathelo zomthetho ezithinte ngokuphelele ukwakhiwa kwamandla avuselelekayo eSpain.
Imithombo evuselelekayo iba semfashinini emazweni amaningi amakhulu
Izinkampani eziningi ziyabheja ekutholeni amandla eziwadingayo emithonjeni evuselelekayo. Iberdrola inikeza amandla ku-Apple, Amazon, Nike phakathi kwabanye
Amandla omoya asebenza ngaphandle komoya
Amandla omoya angenye yemithombo ebaluleke kakhulu yamandla avuselelekayo futhi evusa intshisekelo enkulu ku ...